Apple inopa kumwe kunetsa kwemwedzi waKukadzi | Ndinobva mac
Apple inopa imwe dambudziko kumwedzi waKukadzi
Mazuva mashoma apfuura, mudiwa Jordi akakuzivisa nezve dambudziko iro Apple ratikurudzira kuburikidza neApple Watch, chinetso chekupemberera kuti Kukadzi Mwedzi Nhoroondo Yevatema. Kune vese avo vanoda iwo chaiwo matambudziko anopiwa neApple Watch, iyo Cupertino-based kambani inopa dambudziko nyowani remwedzi uno.
Tiri kutaura nezvazvo Dambudziko reMwedzi Wemoyo, chinetso chinoitika muna Kukadzi 14. Kuti titore bheji redambudziko iri nyowani, isu tinongofanirwa kunyoresa maminetsi makumi matanhatu ekurovedza muviri munhete yaro inoenderana, kungave kuburikidza nekushandisa kurovedza muviri, kupedzisa Apple Fitness + kurovedza muviri kana kushandisa chero chishandiso chinobatana nehutano Hutano.
Mukuzivisa uko Apple yakazivisa dambudziko iri nyowani, tinogona kuverenga:
El Mwedzi Wemoyo Dambudziko Apple yegore negore inokurudzira vashandisi veApple Watch kuti vadzidzise uye vatore maminetsi makumi matanhatu ekurovedza muviri paZuva raValentine kusimudzira hutano hwemwoyo hwakanaka.
Kupedzisa chinetso nechero chirongwa chekudzidzisa icho chinorekodha dhata muApple Fitness app ichavhura iyo chaiyo kubudirira pane iyo iPhone, Apple Watch, uye mune iyo Apple Meseji app.
Uyezve, anotikurudzira kuratidza "rudo" mumoyo make. Nekuita iri dambudziko, Apple ichatipa mubairo ne rakapetwa bheji pamwe zvimiti iyo yatinogona kushandisa zvese kuburikidza neMessage application uye kuburikidza neFaceTime.
Izvo hazvidi kuti uise dambudziko nyowani pakarenda, nekuti mumazuva mashoma, Apple titumire ziviso kuitira kuti tigone kugadzirira timu yedu yemitambo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inopa imwe dambudziko kumwedzi waKukadzi
Apple maemail anoramba achiuya kuzowedzera Apple TV + sevhisi
Kunetsekana kwekare mu macOS kunogona kupa rombo rakanaka kune vashandisi vemuno